जुलियो कोर्टजार: पेरिस र ब्यूनस आयर्सका लागि कविता, जीवनको लागि कविता | समाचार साहित्य
जुआन अर्टिज | | जीवनी, किताबहरु, कविता
Julio Cortazar द्वारा उद्धरण
Julio Cortázar एक प्रसिद्ध अर्जेन्टिनाका लेखक थिए जो आफ्नो ग्रन्थहरूको विशिष्टताको लागि विश्व साहित्यिक दृश्यमा उभिए। उनको मौलिकताले उनलाई महत्त्वपूर्ण काव्यात्मक कार्यहरू, उपन्यास, लघु कथाहरू, छोटो गद्य र विविध उत्पादन गर्न नेतृत्व गर्यो। समयको लागि, उसको काम प्रतिमानहरूसँग तोडियो; उनले अतियथार्थवाद र जादुई यथार्थवादको बीचमा पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रभुत्वको साथ यात्रा गरे।
आफ्नो लामो करियरमा, कोर्टाजार उहाँले बहुमुखी र अर्थपूर्ण पुस्तकहरूको एक बलियो संग्रह निर्माण गर्नुभयो। कुनै कुराको लागि होइन को मुख्य लेखक मध्ये एक मानिन्छ साहित्यिक घटना "ल्याटिन अमेरिकी बूम"। उनले युनेस्को र केही प्रकाशन गृहहरूमा अनुवादकको रूपमा पनि उल्लेखनीय काम गरे। यस अन्तिम पेशामा, एडगर एलन पो, ड्यानियल डेफो, आन्द्रे गिडे, मार्गुरेट योसेनार र क्यारोल डनलपका कामहरूमा उहाँका कामहरू फरक छन्।
1 जुलियो कोर्टजार द्वारा काव्यात्मक कार्य
1.1 उपस्थिति (१९३८)
1.2 Pameos र meopas (1971)
1.3 सेभ द ट्वाइलाइट (१९८४)
1.3.1 "दोहोरो आविष्कार"
2 लेखकका अन्य कविताहरू
2.2 "असल केटा"
2.4 "नयाँ बर्षको शुभकामना"
3 लेखक को जीवनी सारांश
3.1 अर्जेन्टिना मा फर्कनुहोस्
3.2 कठिन बाल्यकाल
3.3 सानो लेखक
3.5 कार्य अनुभव
3.6 अनुवादकको रूपमा योग्यता र तपाईंको प्रकाशनहरूको सुरुवात
जुलियो कोर्टजार द्वारा काव्यात्मक कार्य
यो पाठ 1938 मा जुलियो डेनिस छद्म नाम अन्तर्गत प्रकाशित भएको थियो। यो सम्पादकीय El Bibliófilo द्वारा प्रस्तुत सीमित संस्करण हो। केवल 250 प्रतिहरू छापिएका थिए, जसमा 43 सनेटहरू छन्। यी कविताहरूमा सद्भाव र शान्तिको खोजीसँगै सांगीतिक प्रबल थियो। कोर्टेजार उसलाई यो काममा गर्व थिएन, उनले यसलाई एक आवेगपूर्ण र अपरिपक्व कार्य ठाने, त्यसैले उनले यसलाई पुन: प्रकाशित गर्न अस्वीकार गरे।
1971 मा, JG Santana संग एक अन्तर्वार्तामा, लेखकले कामको बारेमा निम्नमा टिप्पणी गरे: "युवावस्थाको पाप जुन कसैलाई थाहा छैन र म कसैलाई देखाउदिन। यो राम्रोसँग लुकेको छ ... "। यद्यपि यस पुस्तकको बारेमा थोरै थाहा छ, ती मध्ये केही सनेटहरू उद्धार गरिएका छन्, ती मध्ये एक हो:
तिनीहरू दोहोरो राती संस्कार, पर्खिरहेका छन्
सुन्तला तरवार को - शेड
पखेटा भएको मासुमा अनन्त, ओलिन्डर-
र लिलीहरू वसन्तमा खेल्छन्।
तिनीहरूले अस्वीकार गर्छन् - आफैलाई अस्वीकार गर्छन् - मोम हंस
तरवार द्वारा प्रदान गरिएको स्याहार;
तिनीहरू जानुहोस् - तपाईं जानुहोस् - उत्तरबाट कतै पनि जानुहोस्
पौडी खेल्ने फोम सूर्य नमरेसम्म
अद्वितीय खाका पर्खाल सिर्जना गरिएको छ।
डिस्क, डिस्क! उसलाई हेर, ज्याकिन्टो,
सोच्नुहोस् उसले आफ्नो उचाइ कसरी घटाएको छ!
बादलको संगीत, मेलोपिया
यसको उडानको लागि प्लिन्थ बनाउनुहोस्
जुन साँझको चिहान हुनुपर्छ।
Pameos र meopas (1971)
उनको नाममा प्रकाशित यो पहिलो कविता संग्रह हो। यो हो उनका धेरै कविताहरु संग एक संकलन। कोर्टाजार आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न अनिच्छुक थिए, उहाँ यस विधामा आफ्ना रचनाहरूको बारेमा अत्यन्तै लजालु र सतर्क हुनुहुन्थ्यो। यस सन्दर्भमा, उनले टिप्पणी गरे: "म एक पुरानो कवि हुँ [...] यद्यपि मैले ती पङ्क्तिमा लेखिएका लगभग सबै कुरा पैंतीस वर्ष भन्दा बढी अप्रकाशित राखेको छु।
Pameos र Meopas ...
2017 मा, सम्पादकीय Nórdica ले 1944 देखि 1958 सम्म लेखेका कविताहरू चित्रण गर्ने यो काम प्रकाशित गरेर लेखकलाई श्रद्धांजलि अर्पण गरे। पुस्तकलाई छ भागमा विभाजन गरिएको छ - प्रत्येक यसको शीर्षक सहित -, जसमा दुई र चार कविताहरू छन्, तिनीहरूबीच कुनै सम्बन्ध वा विस्तारको मिति छैन। प्रत्येक पाठहरू बीचको उल्लेखनीय भिन्नताको बावजूद - रिसीभरमा संयोगको कमी, विषय, यसको आयाम वा लय - तिनीहरूले आफ्नो विशेषता शैली कायम राख्छन्। यस संस्करणले पाब्लो औलाडेलद्वारा चित्रणहरू चित्रण गरेको छ। तीमध्ये एउटा कविता यस्तो छ:
यदि मलाई तिम्रो मुखको आवाज बाहेक केही थाहा छैन भने
र तिम्रो स्तनमा ब्लाउजको हरियो वा सुन्तला मात्र,
तिमी भएकोमा कसरी घमण्ड गर्ने
पानी माथिबाट जाने छायाँको अनुग्रह भन्दा बढी।
सम्झनामा म इशाराहरू बोक्छु
यसले मलाई कति खुसी बनायो, र त्यो बाटो
आफैमा रहन, घुमाउरो साथ
हात्तीको दाँतको छविको आराम।
मैले छोडेको यो ठूलो कुरा होइन।
साथै विचार, क्रोध, सिद्धान्त,
दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको नाम,
हुलाक र टेलिफोन ठेगाना,
पाँच तस्बिर, एक कपाल परफ्यूम,
सानो हातको दबाब जहाँ कसैले भन्न सक्दैन
संसार मबाट लुकेको छ।
म सबै कुरा सहजै बोक्छु, बिस्तारै बिस्तारै गुमाउँदै छु।
म सदाको बेकार झूट आविष्कार गर्नेछैन,
आफ्नो हातले पुल पार गर्न राम्रो
मेरो सम्झना टुक्रा टुक्रा पारेर,
ढुकुरहरूलाई दिनुहोस्, विश्वासीहरूलाई
भँगेराहरू, तिनीहरूले तपाईंलाई खान दिनुहोस्
गीतहरू र शोर र फ्यापिङ बीच।
गोधूलि बाहेक (1984)
यो उनको मृत्यु पछि प्रकाशित लेखक द्वारा कविता को एक संकलन हो। यो पाठ हो तपाईंको रुचि, सम्झना र भावनाहरूको प्रतिबिम्ब। रचनाहरू बहुमुखी छन्, उहाँका अनुभवहरूका अतिरिक्त, तिनीहरूले उहाँका दुई शहरहरू: ब्यूनस आयर्स र पेरिसको लागि उहाँको प्रेम देखाउँछन्। कृतिमा उनले आफ्नो अस्तित्व चिनाउने केही कविहरूलाई पनि श्रद्धांजलि दिए।
2009 मा, सम्पादकीय Alfaguara एक नयाँ संस्करण प्रस्तुत यस कविता संग्रहको, जुन लेखकद्वारा गरिएका सुधारहरूको पाण्डुलिपिहरू समावेश छन्। तसर्थ, मौलिक पुस्तक र अन्य संस्करण दुवैमा रहेका त्रुटिहरू परिमार्जन गरियो। निम्न सनेट यस प्रकाशनको अंश हो:
जब गुलाबले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ
यात्राका सर्तहरू इन्क्रिप्ट गर्नुहोस्,
जब परिदृश्य समयमा
हिउँ शब्द मेटियो,
त्यहाँ एक प्रेम हुनेछ जसले हामीलाई अन्तमा लैजान्छ
र यो हातमा कुनै सन्देश बिना
यसले तपाईंको हल्का चिन्ह जगाउनेछ।
मलाई लाग्छ कि म हुँ किनकि मैले तिमीलाई आविष्कार गरेको छु,
हावा मा चील को कीमिया
बालुवा र अन्धकारबाट,
र तपाइँ त्यो निगरानीमा प्रोत्साहन दिनुहुन्छ
जुन छायाले तिमीले मलाई उज्यालो बनायौ
र उसले गनगन गर्छ कि तपाईंले मलाई आविष्कार गर्नुभयो।
लेखकका अन्य कविताहरू
आज राती म कालो हातहरू छन्, मेरो मुटु पसिनाले भरिएको छ
धुवाँ सेन्टीपेडहरूसँग विस्मरणको लागि लड्दा जस्तै।
सबै त्यहाँ छोडियो, बोतल, डुङ्गा,
मलाई थाहा छैन यदि तिनीहरूले मलाई माया गरे, र यदि तिनीहरूले मलाई भेट्ने आशा गरे।
ओछ्यानमा सुतेको अखबारमा भनिएको छ कूटनीतिक भेटघाट,
एक अन्वेषक साङ्रियाले उनलाई खुसीसाथ चार सेटमा हराए।
सहरको मध्यभागमा रहेको यस घरको वरिपरि एउटा अग्लो जंगल छ,
मलाई थाहा छ, मलाई लाग्छ कि एक अन्धा मानिस वरपर मर्दैछ।
मेरी श्रीमती थोरै सीढी माथि र तल जान्छिन्
ताराहरूलाई अविश्वास गर्ने कप्तान जस्तै...
मलाई थाहा छैन कि कसरी मेरो जुत्ता खोल्ने र शहरलाई मेरो खुट्टा टोक्न दिने
म पुलमुनि पिउने छैन, म शैलीमा त्रुटिहरू गर्ने छैन।
म इस्त्री भएको शर्टको यो भाग्य स्वीकार गर्छु,
समयमै सिनेमा हल पुग्छु, महिलालाई सिट छोड्छु ।
इन्द्रियको लामो विकार मेरो लागि खराब छ।
सुर्ती, कफी, रक्सीमा,
रातको किनारमा तिनीहरू उठ्छन्
ती आवाजहरू जस्तै जो दूरीमा गाउँछन्
के थाहा बिना, बाटोमा।
भाग्य को हल्का भाइहरु,
डायस्कोरी, फिक्का छाया, तिनीहरूले मलाई डराउँछन्
बानीको झिंगा, तिनीहरूले मलाई समात्छन्
घुमाउरो बीचमा राख्नुहोस्
मरेकाहरूले बढी बोले तर कानमा,
र जीवितहरू तातो हात र छत छन्,
के प्राप्त गरियो र के हरायो भन्ने योगफल।
एक दिन छायाको डु boat्गामा,
धेरै अनुपस्थिति बाट मेरो छाती आश्रय हुनेछ
यो पुरानो कोमलता कि तिनीहरूलाई नाम।
"नयाँ बर्षको शुभकामना"
हेर, म धेरै माग्दिन
तपाईको हात मात्र छ, यो छ
यसरी खुसी सुत्ने एउटा सानो केटो जस्तै।
मलाई त्यो ढोका चाहिन्छ जुन तपाईंले मलाई दिनुभयो
तपाईको संसारमा प्रवेश गर्न, त्यो सानो टुक्रा
हरियो चिनीको, हर्षित गोलको।
के तिमी आज राती मलाई आफ्नो हात उधारो दिनुहुन्न
कर्कश उल्लुहरूको नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या?
तपाईं प्राविधिक कारणले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि
म यसलाई हावामा फैलाउँछु, प्रत्येक औंला बुनेर,
हत्केला को रेशमी पीच
र पछाडि, निलो रूखहरूको त्यो देश।
त्यसैले म यसलाई लिन्छु र यसलाई समात्छु, जस्तै
यदि यो यसमा निर्भर थियो
चार ऋतुको उत्तराधिकार,
भालेको बास, मानिसहरूको माया।
लेखक को जीवनी सारांश
Julio Florencio Cortazar को जन्म अगस्ट 26, 1914 मा ब्रसेल्स, बेल्जियमको दक्षिणी क्षेत्र Ixelles मा भएको थियो। उनका आमाबाबु मारिया हर्मिनिया डेस्कोट र जुलियो जोसे कोर्टाजार, दुवै अर्जेन्टिना मूलका थिए। त्यो समयमा, उनका बुबाले अर्जेन्टिनाको दूतावासको व्यावसायिक सहचारीको रूपमा सेवा गर्नुभयो.
अर्जेन्टिना मा फर्कनुहोस्
जब पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त हुन लागेको थियो, परिवार बेल्जियम छोड्न सफल भयो; उनीहरु पहिले स्विजरल्याण्ड र त्यसपछि बार्सिलोना पुगेका थिए । Cortazar चार वर्षको हुँदा, उनी अर्जेन्टिना आइपुगे। उनले आफ्नो बाल्यकाल बानफिल्डमा - ब्यूनस आयर्सको दक्षिणमा - आफ्नी आमा, उनकी बहिनी ओफेलिया र एक काकीसँग बिताए।
Cortazar को लागि, उनको बाल्यकाल उदासीले भरिएको थियो। उसले6वर्षको हुँदा आफ्नो बुबाको परित्याग भोग्यो र उहाँबाट फेरि सुन्नु भएन। यसको अतिरिक्त, उहाँले ओछ्यानमा धेरै समय बिताउनुभयो, किनभने उहाँ लगातार विभिन्न रोगहरूबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। तर, यो अवस्थाले उनलाई पढ्नको नजिक ल्यायो । केवल नौ वर्षको उमेरमा, उनले भिक्टर ह्यूगो, जुल्स भेर्न र एडगर एलन पो पढिसकेका थिए, जसले बारम्बार दुःस्वप्नहरू देखायो।
उनी विलक्षण युवा बने । आफ्नो नियमित पढाइको अतिरिक्त, उनले सानो लारोसे शब्दकोश अध्ययन गर्न घण्टा बिताए। यो अवस्थाले उनकी आमालाई यति धेरै चिन्तित तुल्यायो कि उनी आफ्नो विद्यालयका प्रिन्सिपल र एक डाक्टरलाई यो सामान्य व्यवहार हो कि भनेर सोध्न गइन्। दुवै विशेषज्ञहरूले उनलाई बच्चालाई आधा वर्षसम्म पढ्नबाट जोगिन र घाम ताप्न पनि सल्लाह दिए।
जब उनी 10 वर्षको हुन लागेका थिए, कोर्टाजारले एक छोटो उपन्यास लेखे केही कथाहरू र सनेटहरू। यी कामहरू निर्दोष थिए, जसले गर्दा तिनका आफन्तहरूले उनीहरूले बनाएका हुन् भनी विश्वास गर्न थाले। लेखकले धेरै अवसरहरूमा स्वीकार गरे कि यो अवस्थाले उनलाई धेरै दुःख दिएको छ।
उनले बानफिल्डको स्कूल नम्बर 10 मा प्राथमिक विद्यालयमा भाग लिए, र त्यसपछि मारियानो अकोस्टा सामान्य शिक्षकहरूको विद्यालयमा प्रवेश गरे। 1932 मा, उनले एक सामान्य शिक्षकको रूपमा स्नातक गरे र तीन वर्ष पछि पत्रको प्राध्यापकको रूपमा।। पछि, उहाँले दर्शनशास्त्र अध्ययन गर्न ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्नुभयो। पहिलो वर्ष पास गरेपछि उनले आफ्नी आमालाई मद्दत गर्न आफ्नो पेशा अभ्यास गर्ने निर्णय गरे।
उनले बोलिभर र चिभिल्कोय लगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा पढाउन थाले। पछि उहाँ लगभग छ वर्ष (1939-1944) सम्म बाँचे र सामान्य विद्यालयमा साहित्य नामांकन पढाउनुभयो। 1944 मा, उनी मेन्डोजामा सरे र कुयोको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा फ्रान्सेली साहित्य पाठ्यक्रमहरू पढाए।। त्यतिबेला उनले आफ्नो पहिलो कथा ‘विच’ पत्रिकामा प्रकाशित गरे साहित्यिक मेल.
दुई वर्षपछि—पेरोनिज्मको विजयपछि—, उनले आफ्नो शिक्षण जागिरबाट राजीनामा दिए र ब्यूनस आयर्स फर्के, जहाँ उनले अर्जेन्टिना बुक चेम्बरमा काम गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि उनले पत्रिकामा ‘घर लिएको’ कथा प्रकाशित गरे ब्यूनस आयर्स को इतिहास — जर्ज लुइस बोर्जेस द्वारा प्रशासित —। पछि उनले अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाहरूमा थप कार्यहरू प्रस्तुत गरे, जस्तै: वास्तविकता, मा र शास्त्रीय अध्ययन को जर्नल कुयो विश्वविद्यालयबाट।
अनुवादकको रूपमा योग्यता र तपाईंको प्रकाशनहरूको सुरुवात
1948 मा, Cortázar अंग्रेजी र फ्रान्सेलीबाट अनुवादकको रूपमा योग्य भए। यो कोर्स पूरा गर्न तीन वर्ष लाग्यो, तर उसलाई नौ महिना मात्र लाग्यो। एक वर्ष पछि, उनले आफ्नो नामको साथ हस्ताक्षर गरिएको पहिलो कविता प्रस्तुत गरे: "लस रेयेस"; यसबाहेक, उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रकाशित: डायवर्टीमेन्टो. 1951 मा उनले रिहा गरे बेस्टेरियो, एउटा काम जसले आठ कथाहरू कम्पाइल गर्छ र अर्जेन्टिनामा उनलाई मान्यता दियो। चाँडै पछि, उनी राष्ट्रपति पेरोनको सरकारसँग असहमतिको कारण पेरिस गए।
1953 मा उनले पोर्टो रिको विश्वविद्यालयको प्रस्तावलाई एडगर एलन पोको गद्यमा पूर्ण भण्डार अनुवाद गर्न स्वीकार गरे।। यो काम अमेरिकी लेखक को काम को सबै भन्दा राम्रो ट्रान्सक्रिप्शन को रूप मा आलोचकहरु द्वारा विचार गरिएको थियो।
फ्रान्सेली माटोमा ३० वर्षभन्दा बढी बसेपछि राष्ट्रपति फ्रान्कोइस मिटर्रान्डले उनलाई राष्ट्रियता प्रदान गरे। 30 मा, लेखक अन्तिम पटक फर्के - लोकतन्त्रमा फर्किए पछि - अर्जेन्टिनामा। केही समय पछि, कोर्टाजार पेरिस फर्के, जहाँ उनको 12 फेब्रुअरी, 1984 मा ल्यूकेमियाका कारण निधन भयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » Julio Cortazar: कविताहरू
एनी राइस: जीवनी र उनको उत्कृष्ट पुस्तकहरू